बिहीबार, जेठ १२ २०७९ ०४:१० PM
सूचना चुहाउने खेलभित्र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको झेल
सोमबार १२ बैशाख २०७९ ०७:२७ AM
चुनावी माहौल छ । राजनीतिक नेतृत्वलाई पैसा चाहिएको छ । राजनीतिक दलले पैसाका लागि जे पनि गर्छन् भनेर निर्माण भएको भाष्य निर्माण भएको छ । यस्तो स्थितिमा अर्थमन्त्रीले खुला रुपमा भन्सार बढाउँछु भन्नु आफैंमा पदीय आचरणविपरीत भएन र ?
विशेष सम्पादकीयः जिम्मेवारीबाट भाग्ने अर्थमन्त्री शर्मा तत्काल राजीनामा देऊ !
आइतबार​ ८ फागुन २०७८ ०३:१८ PM
प्रधानमन्त्रीले संसदमा एमसीसी टेबुल गर्ने भनेसँगै असन्तुष्ट रहेको माओवादी बिहान मात्रै संसदमा टेबुल गर्न सहमत भयो । तर, अर्थमन्त्रीले टेबुल गर्ने भनिएको विधेयक अर्थमन्त्रीले नगरी सञ्चार मन्त्रीले गर्दा अर्थमन्त्रीको दायित्व च्युत भएको ठहर्छ ।
विकृतिका सारथि कर्मचारीलाई उन्मुक्ति !
मङ्गलबार ११ माघ २०७८ ०८:१६ AM
उपल्लो श्रेणीमा रहेको ठूलो हिस्सा सत्य स्थापित गर्नभन्दा पनि धमिल्याउन सक्रिय छ । त्यसलाई तोडमरोड गर्न र समाजमा अराजकता मच्चाउन केही सीमित पूर्वकर्मचारीहरु परिचालित छन् ।
आर्थिक सुधारमा युवा हस्तक्षेप
सोमबार १२ पुस २०७८ ११:४३ AM
आन्तरिक रोजगारी सिर्जना र उत्पादनमूलक क्षेत्रको विस्तारमा पार्टीका आधिकारिक दस्तावेज र सरकारमा पनि त्यही किसिमको छाया देखाउन सके युवा नेतृत्वको चमक अझ बढ्छ । अन्यथा युवा आए पनि के फरक छ र भन्ने सन्देश जनतामा प्रवाहित हुने खतरा रहन्छ ।
बिहीबार २१ असोज २०७८ ०७:२८ AM
मूल्य वृद्धि नियन्त्रण र बजार हस्तक्षेपका लागि आधा दर्जन बढी निकाय निरन्तर अनुगमन गरिरहेका छन् । तर, बजारमा सधैं एउटै प्रकृतिका कैफियत भेटिनु बजार अनुगमन निस्प्रभावी भएको प्रमाण हो । यसले कालोबजारी र नाफाखोरीहरूको आत्मबल पनि बढाइरहेको छ ।
अध्यादेश बजेटकै ‘रजगज’
शुक्रबार​ ११ भदौ २०७८ ११:२२ AM
तत्कालै फेरि संसद् अधिवेशन डाक्ने र बजेट संसद्मा पेश गर्ने अवस्था छैन । यो स्थितिमा सरकारले फेरि बजेट अध्यादेशमार्फत नै ल्याउने देखिन्छ ।
धितोपत्र बोर्डको नालायकी
बुधबार १६ असार २०७८ ०७:४७ AM
नेपालको सेयर बजारका सबैभन्दा ठूला खेलाडी अरू कोही नभएर नियामक निकायका कर्मचारी र सूचीकृत कम्पनीका उच्च व्यवस्थापक तथा सञ्चालकहरू हुन् । त्यसपछि तत्तत् क्षेत्रबाट पोषित लगानीकर्ताकोमा जाने सूचनाहरू बजार चलायमान बनाउने अस्त्र हुन्
सम्पादकीय : लुटेरा राजनीतिक नेतृत्वलाई सजायको पर्खाइ
बिहीबार ३० बैशाख २०७८ ०२:४८ PM
अस्पतालको क्षमताअनुसारको न्यूनतम आवश्यकता पनि परिपूर्ति नगरी सञ्चालनमा आएका र अस्पतालाई कमाइ खाने बनाएकाहरूले यसकिसिमको हर्कत गर्नु अनौठो भने होइन । जब–जब जनतालाई अप्ठयारो पर्छ तब–तब अस्पतालहरूले सेवा दिनेभन्दा प्रणाली कमजोर बनाएर आफू थप बलियो हुने बाटो खोजिरहेको देखिन्छ ।
‘भिजन पेपर’को मनमौजी बयान
आइतबार​ १२ बैशाख २०७८ ०९:०३ AM
महासंघ र परिसंघका योजनाले सरकारी दृष्टिकोणलाई नै पछ्याइरहेको छ । बरु निजी क्षेत्रका सबै संस्थाको सबल संयोजनमा कुन संस्थाले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्ने र तोकिएका लक्ष्य कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेमा केन्द्रित भएको भए निजी क्षेत्रको शाख रहन्थ्यो ।
भ्रष्टाचारको जरो चन्दाराजको अन्त्य !
बुधबार १२ फागुन २०७७ ०१:०२ PM
कृषिमा विदेशी लगानी रोक
मङ्गलबार १३ माघ २०७७ ०६:४५ PM
श्रमको मूल्य पाउन फेरि किसान मर्नुपर्ने हो ?
आइतबार​ ११ माघ २०७७ १०:५४ AM
संवैधानिक आयोगहरूको औचित्य
शुक्रबार​ ३ पुस २०७७ ११:२६ AM
‘इन्टरनेट कन्टेन्ट’मा पनि क्लीन फिड लागू गर
बुधबार १७ मंसिर २०७७ १२:५४ PM
बुधबार १० मंसिर २०७७ ११:४३ AM